Samsung बिलिङ: यो के हो, किन तपाईंले प्रयोग गर्न आवश्यक छ
कोरियाली कम्पनी सैमसंग मोबाइल प्रविधिको क्षेत्रमा Forefront छ। आफ्नो स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टम "एन्ड्रोइड" सामान्यतया दर्जा को शीर्ष रेखाहरू कब्जा आधारित। तर निगम मात्र "फलाम" स्मार्टफोन मा लगे छैन। सबै आफ्नो स्वामित्व धेरै सुविधाजनक छ जो मानक प्रणाली सुरुवात भएको "एन्ड्रोइड" को लागि खोल प्रसिद्ध छ। तर अब प्रयोगकर्ता को सहमति बिना कम्पनी अर्को अद्यावधिक सैमसंग बिलिङ आवेदन उपकरणहरूमा स्थापना गर्न। यो कार्यक्रम के हो र किन आवश्यक छ? गरेको यो बाहिर आंकडा प्रयास गरौं।
यो अनुप्रयोग के हो?
Samsung बिलिङ - यो के हो? यो एक प्रश्न अर्को अद्यावधिक पछि सैमसंग देखि स्मार्टफोन धेरै मालिक बीच खडा छ। यसको कोर मा, यो अनुप्रयोग चिरपरिचित सेवा एप्पल पे को एक एनालग छ, तर केही परिवर्तन संग। अनुप्रयोगको विकास को लागि, कम्पनी बजेट उल्लेख छैन, समय र प्रयास को धेरै बिताए। तर यो प्रयोगकर्ता राम्रो सुन्दर अँगाले र सबै शक्तिहरू आफ्नो स्मार्टफोन बाट हटाउन प्रयास। यसैबीच, यो प्राय अनलाइन कुरा किन्छ गर्नेहरूका लागि धेरै उपयोगी कार्यक्रम छ।
यो अनुप्रयोग अनलाइन खेल मा खरिद एक कार्यक्रम र "एन्ड्रोइड" बजार रूपमा देखिन्छ। यो सार सैमसंग बिलिङ छ। यो धेरै सुविधाजनक छ - यो स्पष्ट छ। तर यो बेला केही सेवाहरू को मद्दतले तिर्ने यी कुराहरू एक निश्चित आवेदन शुल्क लिन केहि भयावह छ। यद्यपि, सक्रिय खरीद गर्न नयाँ विकल्प प्रयोग गरेर र भनेर याद छन् धेरै एकदम सुविधाजनक थियो। विशेष गरी यस्तो विकल्प दिन र रात भुक्तानी खेल मा जो कटा छ ती खुसी छ।
आवेदन को सिद्धान्त
त्यसैले, यो कार्यक्रम को संचालन को सिद्धान्त के हो? परिशिष्ट तपाईंको खाता ब्यालेन्स देखि कुनै पनि सामग्रीको खरिद लागि पैसा withdraws। बस, राख्न तपाईं आफ्नो सन्तुलन बन्द तिर्नुपर्छ। यो सार सैमसंग बिलिङ छ। यो के हो? बेच्न वा सिक्का सफा? यो भन्न गाह्रो छ, तर संसारभरि लाखौं मानिसहरू यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्। र साँच्चै गुनासो छैन। यसको विपरीत। खेल प्रेम गर्नेहरूलाई भुक्तानी छन् (वा conditionally मा-अनुप्रयोग खरिद संग भुक्तानी), खुश। आखिर, तपाईंले कोष खेलबाट, यो छोडेर थप्न सक्नुहुन्छ। तथापि, रूपमा र भङ्ग जान सक्नुहुन्छ।
Oddly पर्याप्त, तर लगभग सबै रूसी संचालक सैमसंग बिलिङ समर्थन। अनुप्रयोगलाई ठीक रूसी वाहन मा काम गर्छ। त्यहाँ पनि सीआईएस अन्य देशहरूमा समर्थन छ। तर यसको सट्टा सामान्य को भुक्तानीको एक समान विधि (को "WebMoney" वा डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर) सबैलाई छैन निर्णय गरेको छ प्रयोग गर्न। तरिका, यो विकल्प सानो विश्वास अझै। विशेष गरी किनभने सैमसंग आवेदन स्टोर मार्फत हालसम्म मात्र खरिद आवेदन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अनुप्रयोगलाई कसरी प्रयोग गर्ने?
यो धेरै सरल छ। आवेदन चलाउन पर्याप्त। यो नै आफ्नो कोठा र सबै आवश्यक गुणहरू निर्धारण गर्नेछ। सबैभन्दा रोचक भुक्तानीको यो फारम दुवै लागि "सम्झौता" उपलब्ध छ, र "तथ्यलाई पछि" भुक्तानी मा बस्न गर्नेहरूका लागि हो। पहिलो रन पछि अनुप्रयोगलाई सबै सञ्चालनका लागि पासवर्ड सिर्जना गर्न शीघ्र हुनेछ। यसलाई के राम्रो। कार्यक्रम त पृष्ठभूमिमा "बसोबास"। र तपाईं पसलमा मार्फत अनुप्रयोगहरू खरीद गर्दा वा भुक्तानी खेल सेवाहरू सैमसंग बिलिङ अनुप्रयोग प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिने छ। त्यसैले, धेरै सुविधाजनक खरीद। तर तपाईं धेरै चाँडै यी आकर्षण मा सम्पूर्ण रकम मार्न सक्नुहुन्छ।
वास्तवमा, अनुप्रयोगको प्रयोग जो कोहि लागि समस्या उत्पन्न छैन। नेभिगेसन reasonably प्रदर्शन, रूसी भाषा पूर्ण, सहज इन्टरफेस छ। यो सबै कार्यक्रम को प्रयोग धेरै सहज छ बनाउँछ। यो एक निश्चित प्लस छ। सामान्यतया, सैमसंग को विकासकर्ताहरूले उच्च गुणस्तरीय कार्यक्रम सिर्जना गर्न सक्षम छन्। तर तिनीहरूले पहिलो पटक धेरै राम्रो छ। यो सुधारात्मक विज्ञप्ति लागि प्रतीक्षा राम्रो त्यसैले छ। र त्यसपछि "पूर्ण मा" प्रयोग गर्नुहोस्। र अघि, यो राम्रो अनुप्रयोग प्रयोग गर्न छैन।
म कार्यक्रम हटाउन?
समस्या यो एउटा प्रणाली अनुप्रयोग हो भन्ने छ। तर सैमसंग बिलिङ, जसको लागि आफ्नो फोनमा रूथ-दायाँ उपस्थिति मात्र आवश्यक हटाउन तरिका छैन। उच्च प्रयोगकर्ता विशेषाधिकार प्राप्त गर्न, यो कार्यक्रम वा Framaroot Kingoroot प्रयोग गर्न suffices। तिनीहरूले स्वतः सबै गर्नेछ। rutovaniya वाहन ग्यारेन्टी गुमाए पछि तर, त्यो चेतावनी गर्नुपर्छ। तपाईंलाई भने "razrutuete" फिर्ता, सैमसंग सेवा केन्द्र तपाईं धोखा छैन। यी व्यावहारिक ज्ञानयुक्त भएकालाई तुरुन्तै फर्मवेयर मा हस्तक्षेप पत्ता लगाउन। त्यसैले तपाईं आफ्नो जोखिममा यसलाई गरिरहेको हुनुहुन्छ।
मूल पहुँच सफलतापूर्वक प्राप्त गरेपछि टाइटेनियम जगेडा कार्यक्रम स्थापना गर्न। कि यो तपाईं सिस्टम आवेदन हटाउन अनुमति दिन्छ। सैमसंग बिलिङ सहित। के यो कार्यक्रम छ र यो आवश्यक छ किन, हामी केवल माथिको छलफल। तपाईं मोबाइल खेल को एक प्रशंसक छैनन् र भण्डारमा केहि किन्न छैन भने, यो तपाईं आवश्यक छैन छ। तपाईं सुरक्षित मेट्न सक्नुहुन्छ। र टाइटेनियम जगेडा प्रयोग गरेर यो कसरी गर्न, तपाईं कार्यक्रममा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो मा रूसी छ। र सबै सुन्दर चित्रित छ।
पहिले नै सैमसंग देखि नयाँ सेवा प्रयोग गर्ने ती, पहिले नै सक्रिय धेरै मंच मा छलफल र यो विचार सुन्दर छ रूपमा, प्रत्येक अन्य साबित गर्न मुख मा फोमिंग छन्। उपकरणहरू सैमसंग सबै मालिक एक असाध्यै तीव्र काम आवेदन चिनो। भुक्तानी सेकेन्ड बनेको छ। यो एक निश्चित प्लस छ। साथै, धेरै राम्रो र सहज इन्टरफेस भन्छन्। केही महसूस प्लस रूसी भाषा (कार्यक्रम फर्मवेयर मा एकीकृत किनभने यो स्पष्ट छ तापनि) को उपस्थिति। लगभग सबै कार्यक्रम महान् प्रयोगकर्ताका लागि सजिलो र जीवन तिनीहरूलाई आफ्नो मनपर्ने खेल बाट विचलित हुन मदत गर्छ भनेर सहमत हुनुहुन्छ।
अरूलाई प्रयोगकर्ता आफूलाई जो कोरियाली विशाल विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने eulogies प्रशंसा ती संग कर्कश बहस। तिनीहरूले कम्पनी धेरै पैसा रूपमा प्रयोगकर्ताहरूको पर्स बाहिर निकाल्न प्रयास गरिरहेको छ बाटो (र केही हदसम्म तिनीहरू सही) जिद्दी गर्छन्। अरूलाई भन्न कि यस्तो आवेदन विशेष मानिसहरूको "brainwashing" को लागि सिर्जना गरिएको छ, त्यसैले यसलाई सही चेकआउटमा के प्रतिशत हटाइएको छ गर्न हेर्न असम्भव छ। साथै, केही कहिलेकाहीं आवेदन स्थिर cribbing मा ग्राहकको खातामा केही नगण्य रकम संकेत केही धेरै शंकास्पद व्यवहार गर्छ भनेर उल्लेख गरेका छन्। र भनिन्छ यस्तो बयान delusional र paranoid हुन सक्दैन। अनुप्रयोगको लागि केही "murky" गर्छ।
किन यो कार्यक्रम प्रयोग गर्न राम्रो छ?
प्रत्येक "अल्फा" कुनै पनि आवेदन, यो रूपमा पनि, त्यहाँ कमियां र बेफाइदा छन्। उनि एक अत्यन्तै अस्थिर, को लोड प्रणालीमा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। को अस्पष्ट पृष्ठभूमि सञ्चालन र शंकास्पद गतिविधि कार्यक्रममा। यो तिर्ने गर्दा बन्द गर्न सम्पूर्ण स्पष्ट चासो पनि छ। यो सबै सैमसंग बिलिङ अत्यन्तै खराब विचार प्रयोग बनाउँछ। मूल्य को पर्खाइ पैच र फिक्स। जब विकासकर्ताहरूले सबै प्वालहरू र मरम्मत भाँचिएको प्रक्रियाहरू अप प्याच, त्यसपछि यो सम्भव पूर्णतया सेवा प्रयोग गर्न हुनेछ। राम्रो अहिलेसम्म सबै यो अनुप्रयोग चलाउन छैन। यो अनौठो कुरा तपाईंले पहिले नै सुरु गरेका छन् भने, यो बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने छ। हटाइनु पर्छ। र रोमाञ्चक प्रक्रिया हामी बस माथि वर्णन गरेका छन्। उहाँले, पाठ्यक्रम, केही लागि निगम खुवाउन भन्दा त लाइसेन्स को हानि खतरनाक, तर राम्रो।
बस सैमसंग बिलिङ कार्यक्रम समीक्षा भएको थियो। के छ - स्पष्ट छ। यो सिर्फ एउटा कुरा अस्पष्ट छ: यो अनुप्रयोग सुरक्षित छ प्रयोग गर्न सम्भव छ। प्रमुख सुरक्षा प्रणाली विशेषज्ञहरु एउटा कुरा मा सहमत: यो कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रत्ययनीय छ। तसर्थ, यो प्रयोग गर्न राम्रो छ। किनभने तपाईं के यो वास्तवमा बस पृष्ठभूमिमा बाहिर झुन्डिएको गर्दा एक समय मा लगी भएको छ थाहा कहिल्यै। यद्यपि, विचार राम्रो छ। कार्यक्रम धेरै प्रयोगकर्ताहरू, मोबाइल खेल प्रेम र तिनीहरूलाई कुनै पनि पैसा छोडूँगा छैन जो विशेष गरी ती लागि सजिलो जीवन बनाउन ठूलो हुन सक्छ।
प्रतिलिपि गर्दा "वचन" मा पृष्ठभूमिमा हटाउन तरिका
Tunngle Windows7मा चलान गर्दैन: सम्भव कारण र समस्या समाधान
तीन समाधान: कसरी PSP फ्लैश गर्न
गुगल - यो के हो?
समारोह मा PHP वैश्विक चर। PHP मा एक वैश्विक चर बनाउन
आईफोन iTunes साथ समिकरण छैन: त्यहाँ यस्तो समस्या र कसरी समाधान गर्न यो छ किन?
"Paroxetine": प्रयोगको लागि निर्देशन, समीक्षा। दबाइ analogues
Lycopodium clavatum: जीवन चक्र, संरचना र प्रजनन
यूनानी केशले कपालको साथ छोटो कपालको लागि कसरी बनाएको छ?
जो बाइक सुरु गर्न चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ
टाटा ग्रैंड स्यान्टाफी: को संभावना संग को छत एसयूवी
प्लाईवुडबाट शिल्प। कसरि प्लाईवुड देखि आफ्नो हातहरु संग शिल्प बनाउन को लागि, एक jigsaw प्रयोग
Cholinesterase inhibitors: pharmacological को प्रयोग
एक वर्षको केटाको लागि उपहार। उत्तम उपहार विचार
कसरी छिटो र कुशलतापूर्वक घाँस धुन
Pokemon समकक्षप्रदर्शनगर्नुहुन्छ। Pokemon खोजी गर्न सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम
बीचमा समूह मार्च को 8 औं मा लिपि: कविता, गीत, नृत्य
जीव मा Extracurricular गतिविधिहरु। जीव मा अतिरिक्त-CURRICULAR गतिविधिहरु को विकास